I-Gas-liquid peeling of scalp
Isikhumba se-scalp sidinga inkqubo yokupasa ngendlela efanayo nesikhumba sobuso kunye nomzimba. Emva kwakho konke, amaseli afile, i-fat fat, iindleko zezinto zokupakisha, njl., Zigcinwa kuyo. Kwaye ukujamelana nokungcola, ukuvala iifolo kunye nokuvimbela ukungena kwe-oksijini kwiibhulabhu zeebhokhwe, ngoncedo lwama-shampoos angcono, i-alas, ayiyi kuphumelela.
Namhlanje kwezinye iindawo zokuhle zorhwebo zenziwa ngolu hlobo lwenkqubo efanelekileyo-inkunkuma ye-gas-liqueling ye-scalp. Kuqhutyelwa ngoncedo lweefayili ezikhethekileyo kunye nombhobho ohambisa ukuhamba kwe-liquid (i-isotonic sodium chloride solution) kunye negesi (i-oxygen ye-oxygen). Ukongezelela, kumxube wegesi-umbane, kuxhomekeka kwiingxaki ezikhoyo ze-scalp kunye neenwele, iivithamini, imithi, njl.
Umphumo we-gas-liquid liquid of the scalp
Ukongeza kwi "ukuhlamba" iimfuthane ezahlukahlukeneyo ukusuka kwinqanaba le-scalp kunye ne-pores, i-saturation enezinto ezincedisayo, le nkqubo inika i-massage, ngokwenza ngcono i-microcirculation in tiscues. Siyabulela oku, iziphumo ezilandelayo zifezekiswe:
ukukhawuleza kokukhula kweenwele ;
ukuqheleka kweengqungqungquthela zengqungquthela yentloko;
iinwele ezinqabileyo kunye neqholi;
ukupheliswa kweempazamo kwi-scalp;
ukuqiniswa kweenwele zeenwele;
ukunika iinwele kunye nokunyanzelisa.
Isiphumo sibonakala emva kwenkqubo yokuqala. Nangona kunjalo, kwiimeko apho kukho iingxaki ezinzulu, kuya kuthatha iiseshoni eziliqela ukwenzela ukufezekisa umphumo ohlala njalo.
Ukutshatyalaliswa kweentsimbi ze-gas-liquid
Kufuneka kukhunjulwe ingqalelo ukuba akuvumelekanga ukuba wonke umntu avunyelwe ukwenza iinkqubo zokusebenzisa i-gas-liquid liquid method. Ukuchasana kwalo kuku:
ukwanda kweqondo lomzimba;
ukunyanzeliswa kokutheleleka kwe-herpes;
intliziyo kunye nesifo se-vascular;
Amancinci amancinci amancinci
Iimfashiso zeenwele ezimfutshane kunye nama-bangs
Umaski weenwele ngeoli yeoliva - 5 zokupheka ezifanelekileyo
Umaski weenwele kunye ne-yogurt kunye neqanda
I-oily scalp - yintoni oyenzayo?
Ipeyinti yokubamba iinwele
Umbala wezinwele ze-Auburn
Iingqungquthela kwiinwele ezinde
Iilungiso zomntu zokulahleka kweenwele
Ukunyamekela iinwele ezibukhali
Ukulungiswa kwitebe ngeenwele ezimfutshane
Kunokuhlamba i-oven yamanqatha amaninzi endala?
Umfanekiso womtshato womtshakazi 2016
Idizayini yehholo eKhrushchev - ukudala ukulungela kwindawo encinci
I-jeans ephathekayo-ekwindla-ebusika 2016-2017
I-Cathedral yeSt. Michael (eBrussels)
Ungakhetha njani i-hob?
Ifenitshala ukusuka kwiipellets
Yintoni eyenza uDmitry Solunsky?
Imifuno yezibini - zokupheka
Ukuxhomekeka ngoMeyi 9 kule nkwenkwana
Izikhwama zeMfashini - i-Spring-Summer Summer Trends
Umbala weTiffany ngaphakathi
I-Pikamilon - izibonakaliso kubantwana
Tendonitis - unyango
Ioli-buckthorn ioli yokutshisa
Ibhinqa ihamba ngeengcambu ezininzi
Yiyiphi imidlalo endiyenzayo?
Isobho se tomato saseMexico
17 ukutya okulula kunye nokutya okulula